တစ်ခုတည်းလီဗာရေချိုးခန်း faucet နီကယ် brushed
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 5.005ထဲကအပေါ်အခြေခံပြီး 18 ဖောက်သည် ratings
faucet စုဆောင်းမှုကသင့်အား timeless layout များကိုရေချိုးခန်းသစ်၏နေရာဒေသများအတွက်နည်းလမ်းအသစ်များဖြင့်ပြန်လည်စဉ်းစားစေသည်။ အမျိုးမျိုးသောချောများတွင်နံရံပေါ်တပ်ဆင်ထားသည့်ရေချိုးခန်းကိုထိပုတ်ပါ။
2321501 installation ကိုညွှန်ကြားချက်
 US မှမူပိုင်ခွင့်သုံးဆ - ကွေးဒီဇိုင်း
အဆင်ပြေ Single- လက်ကိုင်လီဗာ
ဆန်းသစ်သော aerator ဖြင့်ရေ၏ ၅၀% အထိသိမ်းဆည်းသည်
 ၃ နှစ်အာမခံကာလ
SKU: 2321501 Categories: ရေချိုးခန်း Faucets, တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်ရေချိုးခန်း Faucets Tags: 1 ကိုင်တွယ်, ၂၁ ပေါက်, ရေချိုးခန်း faucet
ကို C *** ဎ2020-06-18
အလွန်ကြော့ Faucet, Superve အရည်အသွေးနှင့် esy တပ်ဆင်ခြင်း
ဒီထုတ်ကုန်သည်လက်ကိုင်တစ်ခုတည်းဖြစ်ခြင်းအပြင်ထူးခြားသောအသွင်အပြင်ရှိခြင်းကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကုန်ပစ္စည်း၏အရည်အသွေးနှင့်ပြီးမြောက်မှုအပေါ်အလွန်ကျေနပ်အားရပြီးကျွန်ုပ်၏ ၀ ယ်ယူခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
ငါ့ရေချိုးခန်းထဲမှာရှိပြီးသား2လက်ကိုင် 3- hole faucet ကိုအစားထိုးဖို့ဒီဟာကိုငါဝယ်လိုက်တယ်။ အချည်းနှီးသောအလယ်ဗဟိုအပေါက်သည်သေးလွန်း။ ဤ faucet အသစ်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်တူးရန်လိုအပ်သော်လည်း၎င်း faucet နှင့်ပါ ၀ င်သည့်မျက်နှာပြားသည်တွင်း ၃ ခုကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။
ဒီ faucet သည်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးခေတ်မီသောသံမဏိနှင့်ကြေးဝါပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသုံးပြုသည်။ တပ်ဆင်ရန်အတွက်အလယ်ဗဟိုတွင်တပ်ဆင်ရန်အတွက်ကြေးဝါလက်စွပ်တစ်လုံးရှိပြီးအ ၀ တ်ကိုအချည်းနှီးဖြစ်စေသည်။ ဤသည်ယနေ့ခေတ်တပ်ဆင်ပုံသည်မည်မျှကောင်းမွန်သောပုံဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည် ၀ ိုင် ၂ လုံးမရှိဘဲတင်းကျပ်သောနေရာများတွင်သင့်တော်သော torque ရရှိရန်မည်မျှခက်ခဲသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားသည်။
ရေနုတ်မြောင်းသည်ကျွန်ုပ်၏စုပ်ယူမှုကိုလုံးလုံးလျားလျားမစီးနိုင်ပါ။ သို့သော်သင်ဆွဲသောဘားရှိခြင်းထက်၎င်းသည်တွန်းအားပေးရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ အနက်ရောင်ယိုစီးမှုနှင့်အဖြူရောင်စုပ်ခြင်းတို့၏ဆန့်ကျင်ဘက်သည်ကောင်းသည်။ အချို့လူများကယိုစီးမှုသည်ပလပ်စတစ်ဖြစ်သည်ဆိုသောအချက်ကိုသတိပြုမိနိုင်သည်။ ငါကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှရပ်ပုံကိုကြည့်ရှုရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
မှတ်သားဖို့လိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည်ဤကဲ့သို့သောရိုးရှင်းသောရေပိုက်စနစ်ကိုအရင်ကလုပ်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်သည်။ ငါကအသုံးဝင်တဲ့ DIY'er တစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့်အတွေ့အကြုံရှိရေပိုက်သမားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်သုံးသောကိရိယာများနှင့်ပစ္စည်းများတွင်လိမ်ဖဲ့ခြင်း၊ လိုင်းချောင်းများ၊ ဝက်အူလှည့်ကိရိယာ၊ ရေပုံး၊ သုတ်ပဝါ၊
S က *** y က2020-06-14
ငါဒီ faucet အားဖြင့်အတော်လေးသဘောကျမိပါတယ်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ထားသည်၊ လေးလံသည်၊ အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးကြည့်ရှုနိုင်သည်။ တပ်ဆင်မှုသည်လေထန်မှုတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းထောက်ပံ့ရေးလိုင်းအနည်းငယ်တိုသည်။ မပူပါနဲ့။ ထုတ်လုပ်သူက Teflon တိပ်ကိုတောင်ထောက်ပံ့သည်။ ငါလိုချင်သည်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာ mounting plate အောက်ရှိပလတ်စတစ်အိတ်ငယ်အချို့ဖြစ်သည်။ သို့မှသာအနည်းငယ်ပိုမိုတင်းကျပ်နိုင်သည်။ ငါတစ်ခုခုတက်ဖက်နိုင်သေချာပါတယ်။ အားလုံးခြုံပြောရရင်ဒါက faucet ရဲ့ heck တစ်ခုပါ။
အခြားသူများကထောက်ပြခဲ့ကြသကဲ့သို့, faucet တင်းကျပ်စွာကုန်းပတ်ပန်းကန် ဦး ညွတ်တဲ့သဘောထားကိုရှိပါတယ်။ ဒါကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းနိူင်တာကရေပိုက်တွေဖြတ်သန်းသွားတဲ့ကြိုးကြိုးတစ်ချောင်းမှာ o-ring တွေကိုသုံးဖို့ဖြစ်တယ်။ အိုလက်စွပ်များသည်ထိုလက်ပတ်ပတ်လည်တွင်အရွယ်အစားကြီးမားပြီးသေးငယ်သည့်တိုင်ကုန်းပတ်ပေါ်သို့အလုံအလောက်ရောက်နိုင်သည်။ ငါကဒီအချပ်အနည်းငယ်ကိုပုံထားတယ်၊ ဒါမှအမြင့်ဟာကုန်းပတ်ပန်းကန်အမြင့်ထက်အနည်းငယ်ပိုရှည်တယ်။ o-rings သည်ထပ်ဆောင်းအပိုဆုကြေးတစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည် faucet နှင့် deck plate ကိုဗဟိုပြုနိုင်သည်။ ဒီနည်းအားဖြင့်ငါ faucet ကိုတင်းကျပ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါမှမရွေ့နိုင်အောင်၊
: D *** ဌ2020-06-17
ငါဒီ faucet နှင့်အတူလုံးဝချစ်ကြတယ်။ ၎င်းသည်လတ်ဆတ်သောလိုင်းများဖြစ်ပြီးအံ့မခန်းဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားသည်၊ မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုစျေးပေါသည်။ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည်အလွယ်တကူသိရှိနိုင်ပြီး၎င်းကိုတပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ငါဟာရေပိုက်သမားမဟုတ်၊ အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံးပဲ။ အသစ်သောအရာတွေကိုကြိုးစားရတာကိုငါသဘောတူတယ်၊ အဲဒါကိုတစ်နာရီအတွင်းမှာလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
စီးဆင်းမှု laminar နီးပါးသည်နှင့်သင်ကခွင့်ပြုလျှင်ကတစ်တန်ရေထုတ်ပေးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် guest ည့်သည်တော်ရေချိုးခြင်းတွင် ၀ မ်းမြောက်မိပြီးချီးမွမ်းစကားများရရှိပြီးဖြစ်သည်။
K သည် *** ဎ2020-06-19
ဒါဟာမယုံနိုင်စရာတန်ဖိုးတစ်ခုပါ။ ငါ2သို့မဟုတ်3ကြိမ်အများကြီးချ။ faucets အချို့နှိုင်းယှဉ်သူတို့နှိုင်းယှဉ်ကြဘူး။ ဒီအရာဟာသတ္တုအစိုင်အခဲဖြစ်တယ်။ အဆိုပါခံစားမှုစင်ကြယ်သောအရည်အသွေးသည်။ ငါလူလတ်ပိုင်းအရွယ်လူပျိုပါ။ ငါရေချိုးခန်းကရိယာနှင့်ပတ်သက်။ ဒီပျော်ရွှင်ရဖို့မထင်ပေမယ့်ငါကကြိုက်တယ်!
ငါမူရင်းကရိယာရှိဆဲ 60s ဟောင်းရေချိုးခန်း၌ဤထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ငါကကြိတ်ခြင်းဖြင့်အလယ်အပေါက်ကိုချဲ့ခဲ့ရသည်။ ငါသည်လည်းယိုစီးမှုအတွက်အလားတူလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါနှင့်အတူပါသောယိုစီးမှုကိုမသုံးခဲ့ဘူး, ငါအစိုင်အခဲသတ္တုပေါ်လာအလုပ်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဒါကငါ့ရဲ့ရေချိုးခန်းကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးငါ့ရဲ့လက်တွေကိုလျှော်ဖို့ပဲတောင်မှ၊ ငါတို့တွေအားလုံးမကြာသေးခင်ကများများလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။
တစ်ဦးက *** s ကို2020-06-22
Wowow faucet သည်အရည်အသွေးအလွန်မြင့်မားပြီးဒီဇိုင်းသည်စျေးနှုန်းအတွက်အလွန်ကြော့ရှင်းသည်။ နီကယ်သည်ကောင်းမွန်သောဖဲပုံစံရှိပြီးသန့်ရှင်းစွာ ထား၍ အစက်အပြောက်ကင်းစင်သည်။ ရိုးရှင်းသောလက်ထိန်းချုပ်မှုသည်အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးအလိုလိုသိသည်။ လိုအပ်လျှင်အပေါက်သုံးပေါက်မှတစ်ခုသို့ပြောင်းလဲရန်အဖုံးပြားတစ်ခုတပ်ဆင်ထားသော်လည်းကျွန်ုပ်၏အပေါက်တစ်ခုတည်းထိပ်တွင်ပန်းကန်မပါဘဲတိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်၊ သို့သော်ရေလိုင်းများသည်တစ်ပေခန့်သာကြာမြင့်ပြီးသင်၏အဆို့ရှင်များသို့ရောက်ရန်နောက်ထပ်ရေလိုင်းတိုးချဲ့မှုများလိုအပ်နိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။ ဤသည်ကြော့ထုတ်ကုန်နှင့်စျေးနှုန်းများအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောတန်ဖိုးကိုဖြစ်ပါတယ်။
L ကို *** ဇ2020-06-29
လုံးဝရင်သပ်ရှုမောဖွယ်! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေပိုက်ပြင်သူကဒီအရည်အချင်းကအရမ်းကောင်းလို့သူ့ကိုယ်သူဝယ်ချင်လို့လား။ ငါအရမ်းအကြံပြုလိုတယ် အားလုံးကိုချွေတာရန်အလွန်လှပသည်။
S က *** တစ်ဦး2020-07-01
ငါထိပုတ်ပါနှင့်အလွန်ကျေနပ်မိပါတယ်! ဒီဇိုင်းသည်ရိုးရှင်းပြီးကြော့ရှင်းပါသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ရေချိုးခန်းသည်ကြည့်ကောင်းစေပါသည်။ အကြီးမားဆုံးအားသာချက်မှာ installation သည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ အဲဒါကိုထည့်သွင်းဖို့အချိန်ယူရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ညွှန်ကြားချက်တွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့နားလည်ရလွယ်တယ်။ ငါဒီ faucet ၏အသွင်အပြင်များအတွက်ချီးမွမ်းခြင်းကိုအပြည့်အဝဖြစ်၏။ အပေါ်ထပ်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်စံသတ်မှတ်ထားတဲ့ faucet ကိုငါအရင်ကထားခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကသိပ်မကောင်းဘူး။ ငါဒီ faucet ၏အသွင်အပြင်ကိုကြိုက်တယ်, ငါမျက်နှာပြင်ကုသမှုကြိုက်တယ်!
: D *** y က2020-07-06
10 ထဲက 10! သုံးဝယ်ယူခြင်းနှင့်လုံးဝသူတို့ကိုချစ်ကြတယ်! အလွန်ကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းကိုခိုးယူသည်။
တစ်ဦးက *** s ကို2020-07-12
အဆိုပါ faucet ငါကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်ထက်အနည်းငယ်ထူသို့မဟုတ်လေးလံသည်!
ကို C *** ဇ2020-07-15
ငါစတိုင်နှင့် faucet အလုပ်လုပ်ပုံ, ကောင်းသောပစ္စည်းကိုချစ်။ အရမ်းသဘောကောင်းတာပဲ
, G *** င2020-07-19
ကိုယ့်အစဉ်အဆက်ဝယ်ပထမ ဦး ဆုံးရေချိုးခန်း faucet! အံ့ဩစရာပါလား! ကောင်းစွာနှင့်ခိုင်ခံ့သောလုပ်! ညင်သာသောကြောင့်နစ်မြုပ်နေသောအဆို့သည် ငါချစ်ခြင်းမေတ္တာ absolutley!
အီး *** r2020-07-22
ငါ faucets ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ကို set up စမ်းသပ်မှုဘူတာရုံရှိသည်။
1-10 အတိုင်းအတာအရပြောရရင်ဒီ faucet သည် ၇/၁၀ အထိတပ်ဆင်ရန်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်။
ဤသည်အထူးသဖြင့် faucet ကောင်းတဲ့အရည်အသွေးဖြစ်ပါတယ်။
အနက်ရောင်ပြီးသွားတယ်။ ယေဘုယျအားဒီ faucet အလွန်အကြမ်းခံပုံရသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက Matte ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့် finish ကသိပ်မစုပ်ဘူး။ ၎င်းသည်တောက်ပမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက် chrome ကဲ့သို့အချိန်နှင့်အမျှရှင်းပစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ဒီ faucet ကိုလည်ပတ်ရန်လွယ်ကူပြီးမည်သည့်ပြissuesနာမှမရှိဘဲအလွန်ချောချောမွေ့မွေ့ရွေ့လျားသည်။
၎င်းသည် ၃၆၀ ဒီဂရီလည်ပတ်မှုနှင့်သဟဇာတဖြစ်မှုသည်အပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်တပ်ဆင်နိုင်သော်လည်းသင်လိုချင်သည့်နေရာတွင်ရွေ့လျားနေ ဦး မည်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်ကုန်းပတ်ပြားနှင့်တကွကြွလာ။ မသုံးရသေးသောအပေါက်များကိုသင်၏စုပ်၌သင်ဖုံးအုပ်နိုင်သည်။
သင့်မှာခေါင်းကိုဆွဲချနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်၊ များစွာသောအခြား faucets ဆွဲချကဲ့သို့မကြာသေးမီကမှုန်ရေမွှား Modes သာ။ ဦး ခေါင်းမှထွက်လာသည့်နေရာ၏အခြေခံသည်ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသဖြင့်သင်အသုံးပြုနေစဉ်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှရေပိုက်ကိုတိုက်စားနိုင်ခြင်းမရှိချေ။
S က *** s ကို2020-07-22
အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေခြင်း၊ ပြီးမြောက်ခြင်းတို့နှင့်အတူလှပသောဒီဇိုင်းသည်အကောင်းဆုံး faucets ဖြစ်ပါကဤတစ်ခုလုံးကိုပြုလုပ်ပါ။ ရုပ်ပုံများဖြင့်ပြောရန်ခက်ခဲသော်လည်း faucet တွင်အနုပညာအပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်စေရန်အတွက်စွယ်စုံကိုအနည်းငယ်လှည့်ပတ်သည့်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းရှိသည်။ မိုးသည်းထန်စွာအစိုင်အခဲဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်သည်။ ချွတ် set လက်ကိုင်အမှန်တကယ်အဖြစ်ကောင်းစွာအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ရှေ့သို့ဖြောင့်ဖြောင့်လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်သည့်လက်အိတ်များပင်ရှိသည်။ ငါအလုံအလောက် reccomend လို့မရပါဘူး
ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ထားသည့်ပစ္စည်းအားလုံးနှင့်အတူလွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ထားသည်။ ပစ္စည်းများသည်ကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ထားပြီးအရည်အသွေးကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ရေပိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်မှုကကျွန်ုပ်တို့ faucet ကိုအစားထိုးခဲ့သည်။ ရေသည်ချောချောမွေ့မွေ့စီးဆင်းသွားပြီးတစ်ခုတည်းသောကိုင်တွယ်သူနှင့်ဆူညံသံအနည်းငယ်သာရှိပြီးကျွန်ုပ်၏ faucet အဟောင်းနှင့်မတူသည့် splashing effect နှင့်ကောင်းစွာတုံ့ပြန်နိုင်သည်။ ဒီဇိုင်းသည်ကြော့ရှင်းပြီးကျွန်ုပ်၏ရေချိုးခန်းဟောင်းကိုခေတ်သစ်နှင့်ခေတ်သစ်ပုံစံဖြစ်စေသည်။ တစ်ခုတည်းသောချို့ယွင်းချက်ကို Pop-up drain fixture ဖြင့်မလာပါ။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏အဟောင်းလ်တာအဟောင်းဖြင့်ကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းရမည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အရည်အသွေးကောင်း။ ကြည့်ကောင်းသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်သင့်သည်။ ပြariseနာပေါ်ပေါက်လာပါကနောင်တွင်ကျွန်ုပ်ထပ်မံအဆင့်မြှင့်တင်မည်။
K သည် *** y က2020-08-09
ဒါကငါတွေ့ခဲ့သမျှထဲမှာအရမ်းကောင်းတဲ့ရေချိုးခန်း faucet ပါ။ သူ့မှာစတိုင်တွေအများကြီးရှိပြီးအရမ်းလေးတယ်။ အလွန်ကောင်းစွာလုပ်နှင့်လည်းကြီးမြတ်အလုပ်လုပ်တယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။ အစိုင်အခဲ, ခေတ်မီ faucet လိုသူမည်သူမဆိုဤအကြံပြုလိုပါတယ်။
တစ်ဦးက *** ဎ2020-08-14
ငါရက်စွဲလာပြီသောငါ၏ရေချိုးခန်း faucet upgrade လုပ်ဖို့ဒီဝယ်ယူခဲ့သည်။ ငါ faucet အသစ်တစ်ခုကို install နှင့်အတူအခက်အခဲအဆင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုအထုပ်တွင်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်ကိုလမ်းညွှန်တစ်ခုပေးခဲ့သည်။ အခက်အခဲကတော့ကျွန်တော့်ရဲ့ရေချိုးခန်းထဲမှာငါ့ရဲ့လက်ရှိပိုက်နဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်တာပါ။ ဒါပေမယ့်တွက်ဆဖို့မခက်လွန်းဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်တပ်ဆင်ချိန်သည် ၁ နာရီခန့်သာရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်ပိုက်ဖြင့်မျှမလုပ်ကိုင်ဖူးသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိ faucet တွင် ၃ ခုရှိရာကျွန်ုပ်၏ granite top သို့တူးထားသောကြောင့်၎င်းသည်ပြားကို အသုံးပြု၍ ဤထိပုတ်ရန်မလိုသောအပေါက် ၂ ခုကိုဖုံးအုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ပြားအတွက်လာခြင်းကြောင့်အထူးသဖြင့် ၀ မ်းသာသည်။ ငါတစ် ဦး တည်းတပ်ဆင်ပေမယ့်ခက်ခဲတဲ့အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ပေမယ့်လည်းတစ် ဦး ကိုလက်တစ်စုံထားရှိခြင်းသည်လည်းအလွန်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်အသုံးပြုခဲ့သမျှမှာ ၁၁ မီလီမီတာလိမ်ဖဲ့ခြင်းကျွန်ုပ်၏အိမ်ရေပိုက် (အပူနှင့်အအေးလိုင်း) သို့ရေပိုက်၏ပိုက်ကိုဖိထားသည့်ရေပိုက်နှင့်အောက်ဘက်ကျောက်များရှိပိုက်ထဲသို့ရေပိုက်သွယ်ထားသည့် ၀ င်ပေါက်တစ်ခုနှင့်ယိုစီးမှုအဖုံးကိုပြောင်းလဲရန်ညှပ်တစ်ခုညှပ်ရန်ဖြစ်သည်။
အခုထိငါသုံးနေပြီ။ အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့သူတိုင်းက faucet အသစ်ရဲ့ပုံစံကိုကြိုက်တယ်။ ငါအိမ်မှာပတ်လည်အခြား faucets အဆင့်မြှင့်ဖို့မျှော်လင့်အဖြစ်ငါကျိန်းသေဒီစတိုးဆိုင်ကနေပိုပြီး faucets ဝယ်ယူလိမ့်မည်။
ကို C *** ဌ2020-08-16
ကြည့်လို့ကောင်း။ သေးငယ်တဲ့ရေချိုးခန်းအဘို့အကြီးတွေ။ အရသာ၏မီတာ။
: D *** ဌ2020-08-20